कुकुरको पेटमा रहेको २ केजीको ट्युमर, शल्यक्रिया गरि निकालियो - Damak No.1 Online Patrika
झापा । मानिसको पेटबाट शल्यक्रिया मार्फत ट्युमर निकालेको त हामीले प्रसस्तै सुन्ने गरेका छौं । तर पशुको पेटबाट शल्यक्रिया गरेर ट्युमर निकालेको भने विरलै सुनेका हौंला ।
पशुको पनि बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै धनकुटाको डाँडाबजारमा पेटमा ट्युमर पलाएको जर्मन सेफर्ड जातको कुकुरको सफल सल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । सल्यक्रिया गरि सो कुकुरको पेटमा भएको दुई किलोको ट्युमर निकालिएको छ । कुकुर यतिवेला स्वस्थ्य रहेको शल्यक्रिया गर्ने पशु चिकित्सक डा. रमेश घिमिरेले जनाएका छन् ।
गोविन्द मगरले पालेको कुकुरको पेटमा ट्युमर पलाएपछि पशुचिकित्सक डा. रमेश घिमिरे र डा. देवकुमार दर्लामीको टोलीले असार ८ गते शल्यक्रिया गरेको थियो । यस्तो खालको शल्यक्रिया काठमाडौं उपत्यका बाहिर कम हुने गरेको छ ।